विदेशबाट सामान ल्याउँदा के के मा भन्सार लाग्दैन ? कुन कुनमा भन्सार लाग्छ ? हेर्नुस लिस्ट यसप्रकार छ ... -
तीन वर्ष मलेसियाको एक प्लाष्टिक कम्पनीमा काम गरी सुमन विश्वकर्मा सोमबार नेपाल फर्कनुभयो । मोरङ्ग पथरी घर भएका विश्वकर्माले फर्कंदा ३२ इन्चको टिभी ल्याउनुभयो । उहाँ अब कति भन्सार तिर्नुपर्ने हो भन्ने चिन्तामा हुनुहुन्थ्यो । तर भन्सार कार्यालयले कुनै शुल्क नलिएपछि उहाँ दङ्ग पर्नुभयो ।
यस्तो व्यवस्थाले विश्वकर्मा जस्ता नेपालीलाई धरै राहत मिलेको छ । पूर्ण भन्सार छुटको व्यवस्था धेरै नेपालीलाई थाहा नहुँदा ३२ इन्च भन्दा ठूलो टिभी ल्याएर भन्सार तिर्ने गरेकोे त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय गैह्रीगाँउका प्रमुख टेकबहादुर अर्यालले बताउनुभयो । ‘हामीले ३२ इन्च सम्मको टिभी ल्याउँदा भन्सार शुल्क लाग्दैन भनेपछि उहाँहरु दङ्ग पर्नुहुन्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
नेपालमा स्थायी बसोबास गर्ने नेपाली नागरिक विदेशमा गई नेपाल फर्कंदा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि ल्याउने मालसामानमा भन्सार छुटको व्यस्था रहेको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । त्यसो त भन्सार ऐन २०६४ को दफा ९ को
उपदफा ३ मा उल्लेख भए बमोजिम नेपालमा बसोबास गरेका नेपाली नागरिकले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि ल्याएका सामानहरुमा पूर्णरुपमा भन्सार छुटको व्यवस्था गरेको छ ।
कुन सामानमा भन्सार लाग्दैन ?
विदेश जाने नेपालीले प्रायःजसो सुनका गरगहनाको ल्याने गर्छन । तर उनीहरुलाई कति गरगहना ल्याउँदा भन्सार शुल्क लाग्दैन थाहा नपाएर समस्या हुने गर्छ र ठगीमा पनि पर्न सक्छन् । सुन तथा सुनका गहना ५० ग्रामसम्म र चाँदीको गरगहना पाँचसय ग्रामसम्म तथा एक लाख नेपाली रुपैयाँ मूल्यसम्मको जहारत जडित गरगहनामा कुनै भन्सार शुल्क तिर्नु नपर्ने भन्सार कार्यालयका भन्सार अधिकृत आशिष अर्यालले बताउनुभयो ।
तर यो परिणाम भन्दा बढी सुन तथा चाँदी ल्याएमा भन्सार अधिकृतले सामान ल्याउने व्यक्तिको परिवारको अवस्था हेरि छाड्न पनि सकिने उहाँले बताउनुभयो । यसरी सामान ल्याउने व्यक्ति ६ महिना भन्दा कम विदेशमा बसेको छ र छाड्न उपयुक्त लागेन भने छुट पाउने सुन तथा चाँदी बाहेक अन्यमा ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्ने अर्यालले बताउनुभयो ।
यस्तै ट्यावलेट, ल्यापटप वा कम्प्यूटर, घडी, क्यामरा, भिडियो क्यामरा, सेलुलर, मोबाइल फोन र पेन ड्राइभ १/१ थान ल्याउँदा कुनै भन्सार तिर्नु पर्दैन । त्यस्तै बच्चा राख्ने पेराम्बुलेटर र ट्राइसाइकल १/१ थान ल्याउँदा पनि भन्सार तिर्नु नपर्ने भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।
यसैगरी सात किलोग्राम सम्मका नेपाल सरकारले कुनै अवैधानिक नठानेका खाद्यान्न ल्याउन पाइने व्यस्था छ । मदिराको हकमा १.१५ लिटरसम्मको एक बोतल ल्याउन छुट रहको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । यो भन्दा बढी मदिरा ल्याए भन्सार कार्यालयले त्यस्तो मदिरालाई नष्टसम्म गर्न सक्ने भन्सार अधिकृत आशिष अर्यालले बताउनुभयो ।
६ महिना विदेशमा बसेका नेपालीले निःशुल्क ल्याउन सक्ने सामान
६ महिनासम्म विदेशमा बसी फर्केका नेपालीले पनि केही सामानहरु पूर्ण भन्सार छुटमा ल्याउन सक्ने भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । यस्ता नेपालीले ल्याएका १/१ वटा म्यूजिक सिष्टम, रेफ्रिजेरेटर, वासिङ्ग मेशिन, पंखा, रेडियो, सिडी. प्लेयर, भिसिडी प्लेयर र डिभिडी प्लेयरमा भन्सार अधिकृतले पारिवारिक अवस्था बुझी छुट दिन पनि सक्ने व्यवस्था छ ।
कामदार भिषामा विदेश गएर एक वर्षसम्म बसी नेपाल पर्केका नेपालीले ल्याएका ३२ इन्च सम्मको टिभीमा पूर्ण भन्सार छुटको व्यवस्था गरिएको भन्सार अधिकृत आशिष अर्यालले बताउनुभयो ।
त्यसैगरी लुगाफाटा, जुत्ता, कष्मेटिक्सहरु बढीमा १५ पिससम्म ल्याउँदा कुनै भन्सार शुल्क तिर्नु पर्दैन । घरायसी प्रयोजनका लागि ल्याइने मिक्सर, जुसर, सिलाइ मेशिन, ग्यासटेबुल, इस्त्री, राइस कुकरहरु २/२ थानसम्म ल्याएमा पनि पूर्ण भन्सार छुट हुन्छ ।
१० किलोग्राम सम्म खाद्य परिकारमा पनि भन्सार नलाग्ने भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । व्यवसायिक पेशामा लागेका व्यक्तिहरुले आफ्नो दक्षता वृद्धिको लागि आवश्यक पर्ने सामान २/२ थानसम्म ल्याएमा भन्सार शुल्क लाग्दैन ।
source :- daily.gulfact
एआईजीको छोरालाई चड्काउने प्रहरी निरिक्षक डिबी लिम्...
डेढ महिनासम्म अपराधी पत्ता लागेन, प्रमाण नष्ट गर्न...
हिन्दु परम्परा अनुसार दाहिने शंख को दर्शन गर्न पाउ...
तीनहजार वर्षमा एक चोटी फुल्ने फूल, जुन भाग्यमानीले...
५१ वर्षपछि महाशिवरात्रिमा बन्दैछ बिशेष संयोग, यी २...
भारतीय सेना प्रमुखले भने- “नेपाल र भुटानलाई भारततर...
Prevविदेश देखि पैसा पठाउँदै हुनुहुन्छ ? हेर्नुहोस् आजको विनियम दर (सूची सहित) [पढेर सेयर गर्नुहोला
Next‘S’ बाट नाम सुरु हुनेले अवस्य पढ्नुहोस, के छ रहस्य ?